NYI LYNN SECK 18+ DEN: October 2009
ကျယ်ပြန့်သော မြက်ရိုင်းကွင်းပြင်ကြီး။ နားထဲတွင် လေတိုက်သံ တိုးတိုးလေးကို ကြားနေရသည်။ ခါးလယ်လောက်အထိ ရောက်နေသော မြက်ရိုင်းပင်များသည် တိုက်ခတ်နေသော လေသွားရာ လမ်းကြောင်းကို ဆီးခံရင်း ယိမ်းနွဲ့နေကြသည်။ နေရောင်သည် ခပ်နွေးနွေး ဖြာကျနေ၏။ဆောင်းဦးပေါက်မှာ ကျတဲ့ နေရောင်ဆိုတော့ ရွှေအိုရောင် ခပ်နွေးနွေးလို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ သူထင်နေမိသည်။ မှိုင်းမှိုင်းဝေဝေနှင့် လင်းနေတာမျိုး ဖြစ်သည်။ သူ အဲဒီမြက်ရိုင်းတောကြီးကို အပှေါစီးမှ မြင်နေရသည်။ အဆုံးမရှိလို့ ထင်ရလောက်အောင် တပြန့်တပြောကြီး ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ဒီမြက်ရိုင်းတောကြီး၏ အနားသတ်တွင် မတ်စောက်သော မြစ်ကမ်းပါးကြီး ရှိနေလေသည်။
သူ့အကြည့်များကို ဘယ်မှညာ၊ ညာမှဘယ်သို့ ရွှေ့ပြောင်း စူးစိုက်လိုက်ချိန်တွင် မြက်ရိုင်းတောထဲမှ တစ်စုံတစ်ရာကို သတိပြုမိလိုက်မိလေသည်။ ကလေးငယ်တစ်ယောက်။ နေရောင်သည် မိုးထားသော မြက်ရိုင်းပင်များကြောင့် သူ့ကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေပုံ မပှေါပေ။ အပှေါမှ ဖြတ်တိုက်နေသော လေနုအေးနှင့် မြက်ပင်များကြားက တိုးဝှေ့ဝင်လာသော လေအေးများကလည်း သူ့ကို ထိုအပူဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနေပုံ ရသည်။ သူအိပ်ပျှောနေသည်ဟု ထင်မိသည်။ သဲကြိုးပြတ်ကို သံချိတ်နှင့် ပြန်ဆက်ထားသော သူ၏ တာရာဖိနပ်လေးသည် သူ့ခြေရင်းမှာ အစီအစဉ်မကျနစွာ ပြန့်ကျဲနေသည်။ အရောင်ပြယ် နေပြီဖြစ်သော ကချင်လွယ်အိတ် အနွမ်းလေးထဲက လောက်စာလုံး တစ်ချို့က ဘေးကို ထွက်ကျလို့ နေသည်။ ကလေးငယ်၏ မျက်နှာမှာ အိပ်နေရင်း ပြုံးနေသည်။ သူအိပ်မက်တွေထဲမှာ ပျှောစရာ တွေ့နေပြီ ထင်ပါရဲ့။
အားမာန်ပါလှသော လှံချက် ရင်ဝကို တိုက်ရိုက် စူးနစ်သွားချိန်တွင် ဟစ်အှောလိုက်သော အသံနှစ်ခုက ဆက်တိုက် ထွက်ပှေါလို့လာသည်။ တစ်သံက ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ကြုံးဝါးလိုက်သော အသံဖြစ်ပြီး နောက်တစ်သံက ထွက်သက်နှင့် ဝင်သက်ကို နောက်ဆုံး ပိုင်းဖြတ်ခြင်း ခံလိုက်ရသဖြင့် နာကျင် စူးရှစွာ မြည်တမ်းလိုက်သော ရင်ခေါင်းသံ ဖြစ်သည်။ လေသည် တဟူးဟူးနှင့် တိုက်နေသည်။ နွေလေပူများ ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသံဟူသမျှ တိတ်ဆိတ်နေ၏။ အဆိုပါ အသံနှစ်ခုကြောင့် တိတ်ဆိတ်သွားတာပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် အဆိုပါ အသံနှစ်ခုကို ထင်ရှားစေချင်လို့ အရာအားလုံးက အသံတွေ တိတ်နေခဲ့တာလား ဆိုတာကိုတော့ မည်သူမှ တိတိကျကျ ပြောနိုင်မည် မထင်ပေ။ လဲကျနေသူ၏ ရင်ဝမှ သွေးများက မြင်မကောင်းအောင် စီးကျနေသည်။ မြင်းပှေါမှလူသည် ထိုသူ၏ ရင်ဝမှ လှံကို ဆွဲနှုတ်ယူလိုက်သည်။ သွေးများက ပွက်ခနဲ ထွက်ကျလာပြန်သည်။ မြေပြင်မှလူမှာ အသက်ဝိညာဉ် ကင်းမဲ့လို့နေပြီ ဖြစ်သည်။ မြင်းပှေါမှလူသည် လှံကို အားမာန်အပြည့်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ရင်း မြစ်ကမ်းပါးထိပ်သို့ မြင်းကို အသော့နှင် သွားလိုက်သည်။ ကမ်းပါးထိပ်သို့ ရောက်သောအခါ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှ တောင်တန်းကြီးများကို ကြည့်လိုက်ပြီး စူးစူးနစ်နစ် ကြုံးဝါးအှောဟစ် လိုက်ပြန်သည်။ မြစ်ရေသည် စီးဆင်းမြဲ စီးဆင်းလျက်၊ လေပူများကလည်း တိုက်ခတ်မြဲ တိုက်ခတ်လျက်၊ သို့သှော ဘာမှ မပြောင်းလဲသော ထိုကာလတွင် အရင်က လူနှစ်ယောက် ရှိခဲ့ရာမှ အခုတော့ လူတစ်ယောက် သေဆုံးပြီး လူတစ်ယောက်သာ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ထိုသူသည် ကမ်းပါးထိပ်မှ မြင်းကို မြစ်ဆီသို တဟုန်ထိုး ဆင်းချသွားပြီး ကမ်းစပ်သို့ ရောက်သောအခါမှ မြင်းပှေါက ခုန်ဆင်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် လက်ယာလက်ဖြင့် မြစ်ကမ်းစပ်မှ သဲပွင့်များကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး မြစ်ထဲသို့ ဖြန့်ကျဲ ချလိုက်သည်။ ပြီးလျှင် ထုံးထားသော ဆံထုံးကို ဖြေချလိုက်ပြီး ခေါင်းကို ရေထဲသို့ နှစ်ပစ်လိုက်သည်။ သူ့လှံတွင် စွန်းထင်းနေသော ရန်သူ၏ သွေးစေးများသည်လည်း မြစ်ရေနှင့်အတူ မျောပါသွားလေသည်။ သူ့တွင် ဘဝအသစ် စလေပြီ။
မြစ်သည် ဘာမှမသိသလို ငြိမ်သက်စွာ စီးဆင်းလို့နေ၏။ သူကြားလိုက်ရသော စူးစူးနစ်နစ် အသံများ၊ ရဲရဲနီသော သွေးစေးများ၊ လူတစ်ယောက်၏ ပြတ်သားသော ဆုံးဖြတ်ချက် ကြုံးဝါးသံများကိုတော့ သူ့ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားလိုက်ပုံ ရသည်။ ဒီအဖြစ်အပျက် တစ်ခုတည်းမှမဟုတ်။ သူသိရှိ သိမ်းဆည်းထားခဲ့သော အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက် မျိုးစုံ ရှိသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက် သူကြားခဲ့ရသော အသံများစွာ ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် သူဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြပါ။ ပြောဖို့လည်း မလိုအပ်ပါ။ သူ့တာဝန်က စောင့်ကြည့်သိမ်းဆည်း သွားဖို့ပဲ ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတစ်ယောက်တည်း ရှိနေချိန်များ၊ တိတ်ဆိတ်ချိန်များ ဆိုလျှင်တော့ ထိုအဖြစ်အပျက်များကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် သူရေရွတ်တတ်သည်။ အကျိုးအကြောင်းကို ဆန်းစစ်တတ်သည်။ တိတ်ဆိတ်သော ညများတွင် မြစ်ဆီမှ ထူးဆန်းသော အသံတို့ကို ကြားရတတ်သည် ဟူသော အဖြစ်အပျက်မျိုးကို ကိုယ်တိုင် သှောလည်းကောင်း၊ တဆင့်စကားဖြင့် သှောလည်းကောင်း ကြားဖူးကြ ပေလိမ့်မည်။ သူပြောနေသော ဘာသာစကားကို နားလည်အောင် ကြိုးစားဖူးသူများ ရှိခဲ့ပါရဲ့လား။ သူတစ်ခုခု ပြောနေတယ်လို့ရော ခံစားမိကြပါရဲ့လား။ ဒါမှမဟုတ် သင်တို့မသိသော အဖြစ်အပျက် ရာဇဝင်များ သူ့ထံမှ သိမ်းဆည်းထားတယ်လို့ရော စဉ်းစားကြည့်မိ ပါရဲ့လား။
သူ့နားထဲသို့ ဂီတသံ တိုးတိုးလေးက လေစီးကြောင်းအတိုင်း ဝင်ရောက်လို့လာသည်။ ဂီတသံသည် နီးသွားလိုက် ဝေးသွားလိုက်နှင့် ဖြစ်နေရာမှ တစတစ ပီပြင်လို့ လာလေပြီ။ ဂီတသံနှင့်အတူ မြက်ရိုင်းလွင်ပြင်၏ အစွန်းက မြစ်ဆီမှ ရေစီးသံတို့က ပိုမိုကျယ်လောင် လာသလို ခံစားရသည်။ သူသည် လေတိုးသံနှင့် ဂီတသံတို့ကို အလိုက်သင့် ခံစားရင်း မြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးကို ငေးမောကြည့်နေမိသည်။ နေသည် အနောက်ဘက် မိုးကုပ်စက်ဝန်းမှာ မေးတင်လို့ နေချေပြီ။ ရွှေအိုရောင် အလင်းတန်းများက ပိုပြီးပိုပြီး မှိုင်းညို့တောက်ပလာသည်။ အိပ်တန်းသို့ ပြန်လာသော ငှက်များက မြက်ရိုင်းကွင်းပြင်ကို ဖြတ်ပြီး ပျံသန်းသွားကြသည်။ အိပ်ပျှောနေသော ကလေးငယ်သည် နိုးထလို့လာသည်။ ထို့နောက် မျက်လုံးများကို ပွတ်သပ်လိုက်ပြီး ကမ်းပါးဆီသို့ မြက်ပင်များကို ဖြတ်သန်းကာ ပြေးသည်။ ကမ်းပါးစွန်းကို ရောက်တော့ သူ့ခြေလှမ်းများ ရပ်တန့်သွားသည်။ ထို့နောက် ဝင်လုဆဲ နေမင်းကြီးကို စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်ရှုရင်း လက်အုပ် ချီလိုက်သည်။ သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားမှ မောရသုတ်တှောကို ရွတ်ဖတ်သံက ရေစီးသံများကြားမှာ ညင်ညင်သာသာ ထွက်ပှေါလို့ လာလေသည်။ ထိုနေ့အဖို့ နေဝင်သွားခဲ့ပြီ။
(ရေးထားတာ ကြာလှပြီ။ မေ့နေတာ။ ဒီနေ့မှ ကွန်ပျူတာ ရှင်းရင်း တွေ့လို့ တင်လိုက်ဖြစ်တယ်။ ဒီစာလေးကို ကိုငှက်ရဲ့ ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့သမီး သီချင်းကို စိတ်နှစ်ကိုယ်နှစ် ခံစားပြီး ရေးဖြစ်တာပါ။ ပုံစံကတော့ Script ပုံစံ ပိုပေါက်မယ် ထင်တယ်။ ဒီသီချင်းကို MTV ရိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လို ရိုက်မယ်ဆိုပြီး မုဒ်သွင်းပြီး ရေးဖြစ်တာပါ။)
Posted by NLS at 10/29/2009 09:56:00 PM 15 comments Links to this post
Labels: Essay, Song
Oct 28 ကနေစပြီးတော့ နိုဝင်ဘာ တစ်လလုံး လုံးဝ အားတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ YFS ကကျင်းပတဲ့ Film Workshop တစ်ခုကို တက်ဖို့ ရှိနေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တှောက ပေးစရာ ရှိသူများ၊ ကျွန်တှော့ကို ပေးစရာ ရှိသူများ အဲဒီရက် မတိုင်ခင် ဆက်သွယ်ကြပါ။ စာအုပ်စာတမ်း ငှားရမ်းထားသူများ အားလုံးလည်း အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ အင်တာနက် ရခဲ့ရင်တော့ Blog ဝင်ရေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်။ ကမေဿဘာဒီးယား ခရီးသွား မှတ်တမ်းလေး ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ တေးထားတာတောင် ခုထိ မစနိုင်သေးဘူး။ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကလည်း သိသိသာသာကြီး ကျနေတဲ့အပြင် မီးကလည်း မလာ၊ လာရင်လည်း မီးအားမပြည့်လို့ တှော့တှော့ကို စိတ်ပျက်နေမိတယ်။
Posted by NLS at 10/21/2009 07:42:00 PM 1 comment Links to this post
ဘလော့ကို တန်းပလိတ် ပြင်လိုက်ပါတယ်။ အရင်က အသုံးပြုထားတဲ့ Third Party JS-Kit Comment System ကို သိပ်ပြီး သဘောမတွေ့တော့လို့ ရပ်ဆဲလိုက်ရပါတယ်။ မှတ်ချက် ပေးနိုင်ဖို့ တခြားဘာမှ ထပ်မထည့်တော့ပဲ Blogger ရဲ့ မူရင်း မှတ်ချက်ပေး စနစ်ကိုပဲ အသုံးပြုတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အရင်အဟောင်းက မှတ်ချက်တွေကို အခုထဲကို ပြန်သွင်းလို့ မရတာကိုတော့ နှမြောမိပါတယ်။ ဘလောဂ် တစ်ခုလုံးကိုလည်း ကိုစိုးမင်းရဲ့ ဇှောဂျီ၂၀၀၉ စနစ်ကို ပြောင်းလဲ ပြီးသွားပါပြီ။ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ တန်းပလိတ် အသစ်က နေရာနဲနဲ ပိုကျယ်တာမို့ ပိုလွတ်လပ်သလို ခံစားရတယ်။ အားရင်အားသလိုတော့ ဟိုဖြည့်ဒီဖြည့်လေးတွေ လုပ်ရပါဦးမယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကွန်နက်ရှင် တှောတှောလေး မကောင်းတာမို့ Blogging လုပ်ဖို့တောင် စိတ်အင်အား ကုန်ခန်းနေမိတယ်။
Posted by NLS at 10/21/2009 07:29:00 PM5comments Links to this post
Posted by NLS at 10/19/2009 10:58:00 PM0comments Links to this post
The digital agricultural atlas of the Union of Myanmar isacollection of GIS-derived maps, tabular data and related documents depicting political, physical and agricultural resources in Myanmar. Data are integrated inawarehouse framework, which is the core component of FAO's Dynamic Atlas technology. Dynamic Maps is the free GIS software that displays data warehouses.
The atlas derives from studies carried out by the FAO Investment Centre under the framework of the project "Myanmar Agriculture Sector Review: Analysis and Investment Strategy Formulation" (see below).
Source: GIS Development
Myanmar Agriculture နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ GIS မြေပုံစနစ်ပါ။ တှောတှောလေး ကောင်းပါတယ်။ FAO ကနေ လုပ်ပေးထားတာလို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်၊ တိုင်း တစ်ခုစီရဲ့ အချက်အလက်တွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး စနစ်ကို Nargis ကာလက Place Code တွေ လုပ်တုန်းက တစ်ခါ သုံးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီကတည်းက တှောတှောလေး သဘောကျနေခဲ့တာ။ ဒီဟာကို Dymanic Maps ဆိုတဲ့ GIS စနစ်ပှေါမှာ တင်ထားပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ တခြားပရောဂျတ်တွေ ရှိခဲ့ရင်လည်း အဲဒီအပှေါမှာ GIS Layer တွေအုပ်ပြီး အသုံးပြုလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အခု Download ပေးထားတာက CDRom Version Zip file အနေနဲ့ဖြစ်ပြီး 653Mb ရှိပါတယ်။ သူ့ကို ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲချပြီးရင် Extract လုပ်။ ဖိုဒါထဲက Autorun ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ သူက စက်ထဲကို Install လုပ်ဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားရင် Restart လုပ်ရမယ်။ စက်ပြန်တက်လာတဲ့အခါ အဲဒီ Application ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူက Atlas တွေကို Import လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ ကိုယ်ခုန ဖြေချထားတဲ့ ဖိုဒါထဲက Atlas ဖိုဒါကို ရွေးချယ် ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ Statistic ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ မလွဲမသွေ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသင့်တဲ့ Application တစ်ခုပါပဲ။ ပျှောရွှင်ပါစေ။
Download: [Zip | 653Mb] GIS Maps and Atlases on Agriculture in Myanmar
Posted by NLS at 10/17/2009 01:03:00 PM3comments Links to this post
Labels: Download, Myanmar
Posted by NLS at 10/15/2009 05:38:00 PM3comments Links to this post
Dear Myanmar Bloggers,
Here you haveachance to expend your experiences and to get foreign expertises of blogosphere from different people of different regions. Register there for Asia Blogger Gathering, Hongkong. Good Luck!
See More at: http://www.blogfest.asia
Posted by NLS at 10/12/2009 06:57:00 PM 1 comment Links to this post